ဖန်းတဂွန် စစ်ဌာနချုပ်သုံး ကွန်ပျူတာများထဲသို. ဖောက်ထွင်းခိုးကြည့်သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးအရေးယူခံရမည် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ဖန်းတဂွန် စစ်ဌာနချုပ်သုံး ကွန်ပျူတာများထဲသို. ဖောက်ထွင်းခိုးကြည့်သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးအရေးယူခံရမည်
္က(ဤ သတင်းဆောင်ပါးကို ဖတ်ပြီရင် အင်တာနက် မှာ Hack လုပ်သူများနှင့် တရုတ်ထုတ် ဆော့ဝယ်လ်များကို အသုံးပြုပြီး သူများ၏ဝက်ဆိုက်များကို တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးနေသူများအတွက်သတိထားကြပါ၊)
သံတမန်အခွင့်အရေးအရကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်သည့်ဘဝ၏သက်သေခံအထောက်အထားကိုရှာဖွေရန် ဖန်းတဂွန်နှင့် နာဆာဌာနများသုံးကွန်ပျူတာများထဲသို.ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သည့်အကြောင်းကိုဝန်ခံခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ကွန်ပျူတာဖောက်ထွင်းခိုးကြည့်သူ၏အမေရိကန်နိုင်ငံသို.လွှဲပြောင်းမခံရရေး နောက်ဆုံး အယူခံချက်ကို ရှံးသွားပါသည်၊ ဗြိတိန်တရားရုံတွင်း ခြောက်နှစ်ကျော် အမှုဖြစ်ပြီးနောက် သူ၏အယူခံဝင်မှုကို ဗြိတိရှဘုရင် တရားရုံက တရားဝင်ပယ်ချလိုက်သည်၊
အသက် ၄၂ နှစ်ရှိ ဂဲရီ မက်ကင်းနွန်းဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၂၀၀၁ ခုနှစ်နှင့် မာတ်ခ်ျလ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အကြား လန်ဒန်မြို.၏အနောက်ပိုင်းမှာ နေထိုင်စဉ် အမေရိကန်စစ်တပ်နှင့် အစိုးရကွန်ပျူတာများ အလုံးပေါင်းတစ်ရာလောက်ထဲသို. တရားမဝင် ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်၊ကွန်ပျူတာ နည်းပညာစနစ်ထဲ၌ လှည့်လည်နေစဉ် အာကာသယာဉ်မှာနေထိုင်သူတစ်ဦး ပါဝင်တယ်လို.ထင်ရသော ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ဆွဲချယူပြီးနောက် အဖမ်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်၊
အစီရင်ခံစာအရ သူဟာ တစ်နေ.တွင် အမေရိကန်စစ်တပ်သုံးကွန်ပျူတာအလုံးပေါင်း ၂၀၀၀ ၏ကွန်ယက်ဆက်စပ်မှု (Networks) ကိုဖျက်စီနိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် ရေတပ်စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းဌာနတွင်ရှိကွန်ပျူတာအလုံးပေါင်း ၃၀၀ ကိုလည် ပိတ်ပစ်နိုင်ခဲ့သည်၊
မက်ကင်းနွန်၏လုပ်ရပ်ဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၇) သိန်းလောက်ဆုံးရှံးစေပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသို.လွှဲပြောင်းရေးအမှုကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်၊အမေရိကန်အစိုးရက တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရေးကို၂၀၀၄ အောက်တိုဘာလ ကတည်းက တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဗြိတိန်ကွန်ပျူတာ ရာဇာဝတ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ.၏ စစ်ဆေးမေးမြန်မှုကြောင့် အချိန်(၂) နှစ်ကြာခဲ့သည်၊
မက်ကင်းနွန်အနေနဲ. အမေရိကန်မြေပေါ်ရောက်ရှိလာပြီး တရားမျှတမှုခံစားခွင့်ရရှိရေးကို အမေရိကန် ခရိုင်တရားရုံတစ်ခုဖြစ်သော ဗီလ်ဂျီနီယာအရှေ.ပိုင်းခရိုင်တရားရုံက ဗြိတိန်အစိုးရအား အာမခံချက်ပေးလိုက်ရသည်၊အထူးသဖြင့်၊ဗြိတိန်အစိုးရလိုအပ်သည့် အာမခံချက်ကတော့၊ မက်ကင်းနွန်ကို မသင်္ကာဖွယ် အကြမ်းဖက်သမားတွေ ထိန်းသိန်းထားသည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သော ဂွန်တနမိုး ပင်လယ်အော်စခန်း Guantanamo Bay ကိုမပို.ဖို.ဘဲဖြစ်သည်၊
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ မက်ကင်းနွန်ကို အမေရိကန်အစိုးရ လက်ထဲသို.လွှဲပြောင်းပေးရေးအတွက် ဗြိတိန်အစိုးရက အတည်ပြုပြီနောက် အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာ သူတို.၏ကွန်ပျူတာတွေကို လုံးခြုံအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူဓားစာခံဖြစ်ရတယ် လို.ဝေဖန်ပြောဆိုသံများရှိခဲ့သည်၊
မက်ကင်းနွန်ဟာ ဗြိတိန်မှာ သူအတွက်ရွေးစရာလမ်းကုန်သွားပါပြီ၊ဒါပေမဲ့၊ သူ၏လွှဲပြောင်းခံရမှုကို ဖြာထွက်လေ့လာပြီးစီးသည့်အထိ အမှုမှာဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဥရောပလူအခွင့်အရေးတရားရုံသို. ပြန်တင်ဖို.မျှော်လင့်သည်၊
တစ်ချိန်လုံးမှာ အကြီးမားဆုံးစစ်တပ်ထဲဖောက်ထွင်းခိုးဝင်သူမက်ကင်နွန်အနေနဲ. အကယ်၍ အလွှဲပြောင်းခံရပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ဖက်ဒရယ်ထောင်မှာ အနည်းဆုံး ၁၀ နှင့် အများဆုံး နှစ် ၇၀ အထိကျခံရဖွယ်ရှိသည်။
The U.S. District Court of Eastern District of Virginia had to spendafew additional months reassuring the British government that McKinnon will be offeredafair trial once he arrives on US shores. Specifically, Britain wanted reassurance McKinnon wouldn’t be sent to Guantanamo Bay — where the US holds suspected terrorists — and will be eligible for parole.
In 2006 after it was confirmed the UK was interested in McKinnon’s extradition to the U.S., critics claimed he was being made intoascapegoat because the U.S. military was unable to secure its own computer networks.
“The biggest military hack of all time” could earn McKinnon at least 10 years in federal prison, and up to 70 years maximum if he is extradited and convicted.